Fivarotana ny tranon’ i zafy Albert : Nailik’i Andry Rajoelina amin’olon-kafa ny rihitra -
AccueilRaharaham-pirenenaFivarotana ny tranon’ i zafy Albert : Nailik’i Andry Rajoelina amin’olon-kafa ny rihitra
Efa mazava ny raharaha fivarotana trano sy ny tany etsy amin’ny villa Elizabeth, ary misy ny porofo mivaingana fa dia ny minisitra irery ihany tamin’izany fotoana, sy ny filohan’ny Tetezamita, izay afaka manome ny baiko no tompon’andraikitra. Ankehitriny mantsy dia miezaka mamily ny serasera ireo olona voakasiky ny raharaha ireo, izay mampiasa gazety mitovy firehana amin’ny Tetezamita ihany anilihina ny raharaha. Tsiahivina etoana anefa ny fomba fiasa tamin’ ny tTtezamita, fa tsy afaka manao na inona na inona ireo tale isan-tsokajiny ireo raha toa tsy misy ny baiko avy any ambony dia ny filoha mpitarika ny firenena sy ny minisitra tompon’andraikitra. May mantsy ny endim-boanjon’ ireo voakasiky ny raharaha, taorian’ ny namoahan’ny minisitera ny fanajariana ny tany amin’ny fampiatoana ny fifampivarotana nisy. Indrindra anisan’ny nampikorapaka ny minisitra Reboza Julien ny fanenjehana, izay efa nalefa eny amin’ny birao mahaleo tena misahana ny fifidianana, ka izao mitady hirika handefasana ny raharaha amin’ny olon-kafa izao izy ireo .
Fananam-panjakana ny villa Elizabeth, ary tsy mahavita mivarotra izany n’iza n’iza afa-tsy ny tompon’andraikitra ambony sy manana fahefana irery ihany, ka na dia hamily sy hilalao serasera aza ireo olona ambony ireo, dia tsy ho afa-maina amin’izany. Ekena tokoa fa tsy maintsy mandalo antanan-tohatra maro vao vita ny antontan- taratasy fifampivarotana, saingy rehefa mandeha ny baikon’ny lehibe dia mpanatanteraka ihany ny kely , izany hoe ireo tale isan-tsokajiny eo anivon’ ny fananan-tany izany. Atao ahoana tokoa moa izany fa ny lehibe tahaka an-dry Reboza Julien sy ry Andry Rajoelina dia lava tanana tokoa, ka tsy mampaninona azy ireo raha toa ka olon-kafa no mandray ny sazy eo amin’ny toerany. Raha ny gazety izay nivoaka afakomaly mantsy, izay nampisaringotra olona hafa, dia efa fantatra rahateo fa Mamy Ravatomanga no ao ambadika mba tsy hahavoakitika an’i Andry Rajoelina sy Reboza Julien. Marihina anefa fa tsy hitongilana velively ny Bianco sy ny fitsarana manoloana ity raharaha ity.